IWayin iphehlelela umbane ngokukhawuleza kwiiNdaba eziShukumisayo zeNtlalo | Martech Zone
Intengiso yedijithali ifikelele kwinqanaba lokuncipha. 50% Abantu abadala bayaziphepha iintengiso ezikwiselfowuni kunye nakwidesktop kwaye enye i-47% inyanzelise ukuthintela iintengiso zangaphakathi nohlelo. La manani aqhuba isixhobo sikaWayin, Amabali oLuntu, Isixhobo esibalulekileyo kubathengisi bophawu kunye nabathengisi.
Namhlanje, ukuba abasebenzisi kwi-Instagram bacofa okanye baswayipha phezulu kwi Ibali elixhasiweyo, ihlala ithatha ngokupheleleyo imizuzwana emihlanu kwiwebhusayithi yohlobo lophawu ukuba ilayishwe ngaphakathi kweapp. Abasebenzisi beselfowuni baphelelwa ngumonde, banxunguphele kwaye babuyele kwi-app, kwaye iimveliso zihlupheka kukucofa okuncinci kunye namaxabiso okuzibandakanya.
Amabali oLuntu sisixhobo esivumela ii-brand ukuba zilayishe umxholo onophawu kwisantya sokurekhoda nakwindalo ngaphakathi kwi-app, endaweni yokuthatha kancinci umsebenzisi kwiwebhusayithi yophawu. Kwiimpawu, oku kuvelisa ukubandakanyeka okuphezulu kunye nokuguqulwa kwiifowuni zokwenza isenzo kumabali axhasiweyo.
Amabali oLuntu ekugqibeleni avumela iimveliso ukuba zenze umxholo oxhasiweyo kwi I-Instagram kunye neendaba ze-Snapchat. Isixhobo sandisa amava e-brand kwisantya sokurekhoda, esenza umxholo oxhaswe ngamava anyanzelekileyo kubathengi. Kwiimpawu, oku kuvelisa ukubandakanyeka okuphezulu kunye nokuguqulwa kwiifowuni zokwenza isenzo kumabali axhasiweyo.
Namhlanje, ukuba umthengi ucofa okanye atshintshele kwibali elixhasiweyo, ubakhokelela kwiscreen esingenanto apho ihlala ithatha imizuzwana emihlanu epheleleyo kwiwebhusayithi yohlobo lwebrand ukuba ilayishe ngaphakathi kweapp. Ukulibaziseka kuthintela amava abathengi kunye nophawu kwaye kuhlala kushiya abathengi bekhathazekile ngokwaneleyo ukuba bangene kwenye into. Amabali oLuntu asombulula oku ngokubonelela ngamava akhawulezayo ngombane onokuthi ulayishe kwangoko umxholo wentsimbi ngaphakathi eqongeni, ukudala amava omsebenzisi angenamthungo. URichard Jones, u-CEO weWayin
Ukongeza, amabali oLuntu aqhubele phambili ukubandakanya ii-sweepstakes, iikhwizi kunye noomatshini abaphumeleleyo kwangoko kumabali, ukuvumela ii-brand ukuba ziqokelele idatha yeqela lokuqala le-PII ngamava abhalwe ubuqu, kwaye ekugqibeleni, amaxabiso aphezulu okucofa.
Idemo Wayin Amabali oLuntu
tags: idatha yeqela lokuqalainstagrammabaliIntengiso yeselfowunimobile ekuhlaleniibali lezentlalo elihambahambaIntengiso ehlawulweyouRichard jonesmabaliamabali entlaloIbali lezentlaloIbali elixhasiweyoindlela
Yonke into ekufuneka uyazi malunga neArtificial Intelligence kunye neempembelelo zayo kwi-PPC, eNative, nakwiNtengiso yeNtengiso
Ithuba elimangalisayo lokuThengisa elizayo kunye ne-IoT